Bulshada Muslimiinta oo lagu booriyay inay garab siiyaan xarumaha diinta – The Voice of Northeastern Kenya
Bulshada muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida ayaa lagu booriyay inay u istagaan ka qeyb qaadashada dhismaha iyo dayactirka lagu sameeyo xarumaha lagu barto diinta islaamka sida dugsiyada quraanka iyo madarasooyinka.
Baaqyadan ayaa waxaa laga soo saaray xaflado lacag aruurin ah oo shalay ka kala dhacay ismaamulada Mandera iyo Wajeer.
Waxaa lacago loo aruurinayay madarasada Al-Fataax ee Wajeer iyo madaraso laga dhisayo degmada Qalaliyow ee dowlad deegaanka Mandera.
Muslimiinta ayaa waxaa baaqan u diray qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee dalka oo ay ka mid ahayeen hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Adan Barre Ducaale, xildhibaanka deegaanka Fafi Cabdikarin Cisman iyo xildhibaanka waqooyiga Mandera Bashir Sheekh Cabdullahi
Waxay mudanayaasha sheegeen in dowladda dhexe iyo ismaamulada ay xoogga saaraan dugsiyada maadiga ah sidaasi awgeed bulshada muslimiinta ah laga doonayo inaynan u kala harin ka qeyb qaadashada goobaha diinta .
← Madaxweynaha dalka oo canaantay saddex ka mid ah golihiisa wasiirada
Madaxweynaha Jubbaland oo Magacaabay Guddiga doorashooyinka →